Umbandela woku ngacuthwa zavenge | News24
Umbandela woku ngacuthwa zavenge
IOmbudsman ye-Inshorensi Yexesha Elide uJaji Ron McLaren uvakalise amazwi enkxalabo ngenqatho eyenziwa ngabanye abanikezeli be-inshorensi yokuba bangazinciphisi izavenge xa kuncitshiswa iinzuzo.
Ngoko, uthe, kubaluleke kakhulu ngabathengi be-inshorensi ukuzazi kakuhle iinkcukacha nemigqaliselo yeepolisi zabo ngoba into nokwenzeka ungacinga unepolisi yokugula kanti ibhaliswe ngokuba yeyengozi.
Waleke ngokuthi ezinye izibhengezo ze-inshorensi zilungiselelwe abantu abaneemeko ezithile umzekelo, abantu abantsholongwane ye-HIV okanye abanesifo seswekile.
“Xa abathengi befowuna ukuze bafake isicelo sepolisi, kukho inkcoko ende nomnikezeli we-inshorensi.
“Ngamaxesha amaninzi umntu othengelwa le onshorensi asinguye lo ufaka isicelo nohlawula izavenge kodwa ngomnye umntu njengelinye ilungu losapho.
“Ukuze ube nepolisi ngamanye amaxesha kudla ngokufuneka uvavanyo lwezempilo ukuqinisekisa ukuba loo mntu uyafaneleka ukufumana loo polisi.
“Into engafanele icace kumthengi nakumhlawuli kukuba, xa engafaneleki, loo polisi iya kumenza azuze nje okona kuncinane – umzekelo afumane ipolisi yengozi, kodwa angazifumani iinzuzo zokugula.”
UJaji McLaren uthe, into edala lo mbodamo kukuba izavenge azifane zehle kuba nje unepolisi enokukunceda xa kuvela ingozi.
“Kwiofisi yethu sithi lo mkhwa wokuhlawulwa kwezavenge ezingancitshiswayo yinqatho. Sikhe sathethana nabanikezeli bee-inshorensi ngezi polisi kunye neSigqeba Seenkonzo Zezimali, ibe ngoku abanikezeli be-ishorensi baza kuxoza mpini wumbi (kuqaka naba sele bezinciphisa izavenge).
UJaji McLaren uthe: “Abathengi beepolisi bangaphambili kungenzeka ukuba zincitshisiwe izavenge kodwa abazi ukuba ngoku bangafaka isicelo senzuzo kuphela xa kunokuvela ingozi.”
Iofisi Ye-Ombudsman Yexesha Elide yamiselwe ngowe-1985. Umsebenzi wale ofisi kukuze ingenelele phakathi kokungavani kwamalungu nabanikezeli be-inshorensi yexesha elide nabanikazi beepolisi malunga neekontraki ze-inshorensi.
Yiofisi ezimeleyo, nemele iphendule kwiBhunga Ye-Ombudsman Ye-inshorensi yexesha elide. Fowunela: 0860 103 236